Trump: Xaq baan u leeyahay in aan xaqiiqda la wadaago Ruushka - BBC News Somali
Image caption Trump oo dhexda ku jira oo la kaftama Lavrov oo bidix taagan iyo danjire Sergei Kislyak
Madaxweyne Donald Trump ayaa difaacay 'xaqa uu u leehay' inuu macluumaad la wadaago Ruushka, ka dib markii uu muran ka dhashay macluumaad sir ah oo la sheegay in madaxweynuhu uu la wadaagay wasiirka arrimaha dibedda ee Ruushka.
Mr Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhiga inuu Sergei Lavrov la wadaagay ''xaqiiqooyin ku saabsan argagaxisnimada iyo badqabka duulimaadyada''. Waxa uuna sheegay inuu doonayay in Ruushka uu gacan ka gaysto la dagaalanka kooxda la magac baxday dowladda Islaamka.
Trump ayaa todobaadkii hore Aqalka Cad ku qaabilay Sergei Lavrov.
Saraakiisha ayaa diiday wararka warbaahinta laakiin masuul sare oo ka tirsan xisbga Jamhuuriga ee Trump ayaa dalbaday in faahfaahin laga bixiyo arrintan.
Trump 'ayaa aqbalay Ruushka inuu u dhacay doorashada Maraykanka'
Laakiin madaxweynaha ayaa eedaymahaas waxba kama jiraan ka soo qaaday isaga oo ku sheegay "war been ah"
Intii uu Trump ku jiray ol'olaha doorashada wuxuu ku celceliyay dhaliil uu u jeediyay Hillary Clinton oo ay isla tartameen taas oo ku saabsanayd sida ay u maaraysay macluumaadka muhiimka ah ee sirta ah.